Sharciyo cusub oo dhowaan dhaqangelaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sharciyo cusub oo dhowaan dhaqangelaya
Publicerat fredag 28 juni 2013 kl 15.47
Bisha soo socota kowdeeda waxaa dhaqangeli doona sharciyo cusub. Sharciyadaan cudubna waxaa ka mid ah in carruurta sharci-darrada dalka ku jooga ay helaan xuquuq la mid ah xuquuqda carruurta kale ee Iswiidhen ku nool. Ann-Marie Begler oo xoghaye guud ka ah Hay’adda dugsiyada oo ka hadleysa arrintaan ayaa idaacadda P1 u sheegtay:
- Waxaa loo baahan in hay’adaha bulshadu ay aad isu la shaqeeyaan. Waxaa iyaguna meesha aan ka maqnayn ururo samafal oo kaalmooyin u fidiya qoysaska iyo carruurta sharci-darrada ah. Waana arrin muhiim ah in ururadaas laga la kaashado sidii carruurtaas waxbarashada loogu jiheyn lahaa, iyadoo la iftiimanayo degmooyinka tallaabadaan sida wanaagsan wax uga qabtay.
Xuquuqdaasna waxaa ka mid ah in ay wax ka bartaan dugsiyada dalka. Waxaa kaloo dadka sharci-darrada dalka ku jooga xaq loo siinayaa daryeel caafimaad oo u dhigma kan siiyo dadka magangelya-doonka ah.
Sharciyadaas cusubna waxaa ka mid ah in ciqaabta lagu xoojiyo dadka carruurta faraxumeeya, iyo in dembi laga dhigo sawirqaadidda sharaf-dhaca ah.
Sharci kale oo muhiim ayaa lagu mamnuucayaa in si qarsoodi sawir ama filin sharaf-dhac ah looga qaado qof ku sugan xaalad u gaar ah, sida qolka dharka la iskaga beddelo.
Dad badan ayaase shaki ka muujiyey sharcigaan cusub oo khuseeya sawir-qaadidda. Mar ay idaacadda Ekot wax ka weyddiisey sharcigaan dhowaanta la ansaxiyey wuxuu guddoomiyaha ururka suxufiyiintu, Jonas Nordling, yiri:
- Waqtigaan maanta ah oo qof waliba kaamirad jeebka ku sito, waxaan caadeysaney in aan isticmaalno sawiro ay akhrisayaashu noo soo diraan. Hadda kadibse ma heli doono sawiro maadaama ay dadku ka cabsan doonaan in ay sharci jebiyaan haddii ay sawiro qaadaan.
Waxaa kaloo sharciyadaan ka mid ah sharciga ku saabsan ciqaabta dadka carruurta u isticmaala galmada oo laga soo kordhiyey lix bilood lana gaarsiiyey hal sano oo xabsi ah. Noocyo badan oo faraxumeyn ah oo kufsi loo aqoonsan yahay ayaa wax laga beddelay oo la sii adkeeyey.
Waxaa kaloo dhaqangelya sharci joojinaya in la dhufaano dadka jinsiga jirkooda beddela, sida marka nin isu beddelo qof dumar ah. Waxaa kaloo shuruudo in ay ruqsad haystaan lagu xiray dadka ama shirkadaha doonaya in ay furtaan shirkadaha adeegga gargaarka gaarka ah ama afka iswiidhishka loogu yaqaan personlig assistent. Dhanka burcad-badeedda sharci cusub ayaa soo baxay oo doonyaha iyo maraakiibta iswiidhishka xaq u siinaya in ay kireystaan ilaalo hubeysan si looga hortago afduub.
XAQIIQADA XEERARKA CUSUB
Sharciyada dhaqangelaya 1da Luulyo 2013
Ruqsadda kaamirooyinka lagu dhejiyo dukaamada iyo gaadiidka dadweynaha
Tallaabooyin sare loogu qaadayo xirfadda macallimiinta.
Ciqaabta la mudanayo haddii lacag lagu bixiyo in la la galmoodo carruur oo la adkeeyey. Qofkii lagu helana maxkamad ayaa la hor keenayaa xataa falka dembiga ah u galay dal kale.
Maraakiibta iyo doonyaha Iswiidhen waxay kierysan karaan. Waxaana looga dan leeyahay afduubka ay geystaan burcad-badeedka ku sugan badaha caalamiga ah.
Ruqsad in la furto shirkadaha adeegga gargaarka gaarka ah ama personlig assistens, iyo in la adkeeyo shuruudaha dhaqaale ee shirkadaha bilaabaya hawlo noocaas ah si looga hortago shirkadaha aysan dhab ka ahayn waxqabadkoodu.